Akọrọ ọbọgwụ Jerky - Goodao Technology Co., Ltd.
Dry Duck Jerky bụ otu n'ime nri nkịta kacha ere ere dabere na anụ ọbọgwụ. Anyị na -ahọrọ anụ ara ọbọgwụ dị elu dị ka ihe ahịrị, wee hazie ya n'ime mmepụta ihicha. A na -ahụ ụdị anụ ahụ nke ọma na anụ nwere njiri mara ụtọ, isi siri ike ma dịkwa njikere ịnụ ụtọ mgbe emepere ya. Ọ nwere ọnụ ọnụ chewy iji nyere ụmụ nkịta aka ịta ikikere ezé.
Aha ngwaahịa Akọrọ Duck Jerky
Anyị na -a ahụmahụ emeputa. Inweta ọtụtụ asambodo dị mkpa nke ahịa ya maka ezigbo mma China Petideal Rawhide Chips na Chicken Meat Dog Snacks Supplier, nkwalite na-adịghị agwụ agwụ na ịgbalị maka ụkọ 0% bụ amụma abụọ kacha mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọ bụla, egbula oge ịkpọtụrụ anyị.
Ezigbo nkịta nri nkịta China na ihe nkịta na -enye anụ ụlọ, ndị ọrụ anyị niile kwenyere na: Ogo na -ewu taa na ọrụ na -emepụta ọdịnihu. Anyị maara na ezigbo mma na ọrụ kacha mma bụ naanị ụzọ anyị ga -esi nweta ndị ahịa anyị na iji nweta onwe anyị. Anyị na -anabata ndị ahịa n'okwu niile ịkpọtụrụ anyị maka mmekọrịta azụmaahịa n'ọdịnihu. Ngwọta anyị kacha mma. Ozugbo ahọpụtara, zuru oke ruo mgbe ebighị ebi!
Nke gara aga: Mpekere ọkụkọ na ọbọgwụ
Osote: Ahịhịa ọbọgwụ kpọrọ nkụ
Ọbọgwụ Duck Jerky gbagọrọ agbagọ
Ọbọgwụ Duck Jerky